Abdishakur ayaa wuxuu ka digay in maamulka Puntland "aanu intaas ka badan u adkaysan karin gardara cad ee uu maamulka Somaliland ku kacayo".
Wasiir ku xigeenka warfaafinta Puntland oo la hadlaya shacabka Boosaaso.
Laascaanood,20 Feb 2003 - Maamulka la magacbaxay Somaliland ayaa beeniyey eedaymo ay qaar ka mid ah masuuliyiinta dawlad goboleedka ay deriska yihiin ee Puntland ay ku eedeynayeen maamulkaas Hargeysa inay taageerayaan isla markaana hubaynayaan ciidamada mucaaradka ku ah dawlad goboleedka Puntland.
Abdullahi Muhammad Duale, oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la magac baxay Somaliland ayaa weriyayaasha u sheegay in eedaymahaasi ay yihiin "kuwo aan sal iyo raad toona lahayn".
Abdishakur Mire Adan, oo isaguna ah wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dawlad goboleedka Puntland ayaa ku eedeeyay maamulka Somalilnd inay caawimo isugu jirta hub iyo dhaqaale kaleba u fidiyaan ciidamada uu wato Gen Cade Muuse,ninkaas oo ah nin daacad u ah ninka ay sida ba,an isaga soo horjeedaan Cabdillaahi Yuusuf ee Jaamac Cali Jaamac.
"Waxaanu haynaa cadayn tusaysa in maamulka Riyaale uu u ogolaaday in Cade Muuse uu kala soo degey dekeda Berbera 12 gaadhi oo nooca Cabdi Bilaha loo yaqaan ah,iyadoo isla markiiba 7 ka mid gawaadhidaas la saaray hub.]," Sidaas waxa weriyayaasha u sheegay Abdishakur. Isagoo weliba sii raaciyey in uu maamulka Hargeysa uu ciidamada mucaaradka ku ah Puntland uu u qaybiyey 300 oo noocyada hubka fudud ah.
Abdishakur ayaa sheegay in ciidamada Cade Muuse lagu tababaro meesha la yidhaahdo Xamilka oo ah tuulo ku taala gobolka Sanaag,iyadoo ay ciidamadaas ilaalinayaan ciidamada Somaliland ee ku sugan tuulada Dararweyne oo iyaduna ah gobolka Sanaag.
Labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa labaduba sheegta gobolada Sool iyo Sanaag,taasoo sababtay in Riyaale mar uu ciidamo la soo galay magaalada Laascaanood oo ah magaala madaxda gobolka Sool ay ka keentay inay yaraato taageeradii loo hayey maamulka Riyaale,xoojisayna taageerada loo hayo Puntland,iyadoo sida xaqiiqda ah ay dadka deegaankaasi intooda badani aanay labada maamul midna taageero fiican u haynin,balse dadka dega gobolada Sool iyo Sanaag waxay isir wadaagaan dadka reer Puntland.
"Waxaanu ku khasbanahay inaan talaabo ka qaadno koox kasta oo khatar gelin karta nabadgelyadayada ," Sidaas waxaa yidhi Abdishakuur. "Hadii Somaliland ay faraha kala bixi weydo arimaha Puntland,iyaga ayaa qaadi doona masuuliyada dhibaatadii ka timaada arintaas.Waxyaalaha uu ku kacayo maamulka Riyaale waxay horseedi kartaa colaad dhex marta Hartiga[Darod] iyo Isaaqa."ayuu ku soo koobay hadalkiisii Cabdishakuur.
Hadaba waxaa isaguna isagoo arintaas ka hadlaya weriyayaasha u sheegay Mr Ducaale oo ah wasiir ka tirsan maamulka Riyaale in ay caawinayaan oo keliya dad naftooda la soo baxsaday,balse marnaba ayan isku dayaynin inay dhibaato ku abuuraan dad kale.
"Waxaa aad noogu weyn nabad inaan ilaalino nabad gelyada iyo degenaansha,marnabana inaan carqaladayno dhici mayso.," Sidaas waxaa yidhi Mr Ducaale oo hadalkiisa sii wata.Wuxuu Mr Ducaale sheegay in xiliga ay arimahani dhacayeen ay ku soo beegantay xili ay ku jireen doorashooyinka madaxtinimada,taasoo sida la filayo dhici doonta bartamaha bisha April ee sanadkan. "Waxaa aad noogu weyn hawlaha Dimuqraadiyada sida ay u socdaan," ayuu yidhi Mr Ducaale.
Mr Ducaale oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi maamulka Cabdullahi Yusuf waa sidii "qof gurigiisii gubtay oo isku dayaya inuu dab qabadsiiyo guryaha deriskiisa ah ".
"Siyaasadayadu waxay tahay,weligeedna ay ahayd inaan ka shaqayno nabadgelyada iyo degenaanshaha goboladayada ,"ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisii.